TikTok Ganacsi: Ku Gaar Macaamiisha Ay khuseyso Shabakaddan Muuqaalka ah ee Foomka Gaaban | Martech Zone
TikTok waa meesha ugu horaysa ee loogu talagalay fiidiyowga gaaban ee moobiilka, oo siinaya waxyaabo xiiso leh, iska caadi ah, oo dhab ah. Shaki yar baa ka jira koritaankiisa:
TikTok waxay leedahay 689 milyan oo isticmaala bil kasta adduunka oo dhan.
Barnaamijka TikTok waxaa laga soo dejiyey in ka badan 2 bilyan oo jeer App Store iyo Google Play.
TikTok ayaa kaalinta ugu sarreysa ka gashay barnaamijka ugu badan ee laga soo dejiyey Apple App-ka App Store Q1 2019, in ka badan 33 milyan oo soo degsasho ah.
Boqolkiiba 62 dadka isticmaala TikTok ee Mareykanka waxay udhaxeeyaan 10 iyo 29 sano.
TikTok waxaa laga soo dejiyey 611 milyan oo jeer gudaha Hindiya, taas oo qiyaastii ah 30 boqolkiiba wadarta barnaamijyada lagala soo baxo adduunka.
Markay tahay waqtiga maalinlaha ah ee TikTok lagu qaato, adeegsadayaashu celcelis ahaan 52 daqiiqo ayay ku qaataan barnaamijka.
TikTok waxaa laga heli karaa 155 dal, iyo 75 luqadood.
Boqolkiiba 90 dhammaan isticmaaleyaasha TikTok waxay helaan abka maalin kasta.
In ka yar 18 bilood, tirada dadka waaweyn ee isticmaala TikTok ee Mareykanka ayaa koray 5.5 jeer.
Waxaa jiray celcelis ahaan tiro ka badan 1 milyan oo fiidyowyo ah oo la daawaday maalin kasta sanadkii.
Xigasho: Oberlo - 10 TikTok Statistics Taasi Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato 2021
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan adduunka, TikTok waxay siisaa shirkadaha fursad ay ku gaaraan bulsho badan oo adeegsadayaal ahmiyad siiya madadaalada iyo xaqiiqnimada.
TikTok For Business waa mid ka mid ah shabakadaha kaliya ee la kulmay koritaanka weyn ee iOS (+ 52% saamiga suuqa). Shabakadda bulshada ayaa kor u kacday 1 booska macruufka illaa # 7 iyo 1 kaalinta ah ee soo degitaanka Android # 8. Heerka isweydaarsiga isweydaarsiga, wuxuu gaaray heerka sare ee 5 awood ee madadaalada, bulshada, qaab nololeedka, caafimaadka & jimicsiga, maaliyada, sawir qaadista, iyo kooxda utility.
Tusmada Waxqabadka AppsFlyer
Maareeyaha Xayeysiiska TikTok
Maamulaha Xayeysiiska TikTok, shirkadaha iyo suuqleyda waxay marin u heli karaan dalab iyo meeleyn Xayeysiisyada In-App (IAA) ama u bilaabi barnaamijyadooda moobilka dhagaystayaasha caalamiga ah ee TikTok iyo qoyskooda barnaamijyadooda. Laga soo bilaabo bartilmaameedka, abuurista xayeysiiska, warbixinnada aragtida, iyo aaladaha maareynta xayeysiinta - Maareeyaha Xayeysiiska TikTok waxay ku siineysaa awood awood leh, laakiin si fudud loo isticmaali karo oo kaa caawin doonta inaad gaarto dhagaystayaasha jecel alaabadaada ama adeegyadaada.
Meelaynta TikTok iyo Foomamka
Adiga xayeysiiska ah ayaa ka soo muuqan kara mid ka mid ah goobaha soo socda iyadoo lagu saleynayo abka:
Meelaynta TikTok: Xayeysiisyadu waxay u muuqan doonaan sidii xayeysiisyo xayeysiis ah
Meelaynta barnaamijyada cusub: Xayeysiisyadu waxay ka muuqan doonaan jagooyinka soo socda:
BuzzVideo: in-feed, bogga faahfaahinta, fiidiyowga kadib
TopBuzz: in-feed, bogga faahfaahinta, fiidiyowga kadib
Wararka Jamhuuriyadda: in-quudinta
Babe: in-feed, bogga faahfaahinta
Meeleynta gantaalka: Xayeysiisyada ayaa ka soo muuqan doona sida xayeysiis la ciyaari karo, Xayeysiinta fiidiyowga ee kala-dhexaadka ah, ama xayeysiisyada fiidiyowga ee abaalmarinta leh.
Maamulaha Xayeysiiska TikTok ayaa labadaba taageera image xayeysiiska iyo xayeysiiska fiidiyowga qaababka:
Xayeysiiska Sawirka - waa laga koobnaan karaa gudaha oo PNG ama JPG labadaba waa lagu aqbalaa xalka la soo jeediyey ee ugu yaraan 1200px dheer 628px ballaaran (xayeysiiska jiifka ah ayaa sidoo kale la dejin karaa).
Xayeysiin Video - iyadoo kuxiran meesha aad jeceshahay inaad dhigto, saamiyada dhinacyada 9: 16, 1: 1, ama 16: 9 waxaa loo isticmaali karaa fiidiyowyo 5 ilbidhiqsi ilaa 60 ilbidhiqsi dheer .mp4, .mov, .mpeg, .3gp , ama .avi qaab.
TikTok ayaa bixisa Template Video, qalab ka dhigaya abuurista xayeysiisyada fiidiyowga mid dhakhso badan oo fudud. Waxaad si fudud u abuuri kartaa xayeysiis fiidiyoow ah adiga oo dooranaya qaab-dhismeed oo aad soo rari karto sawirradaada, qoraalkaaga, iyo astaamahaaga
TikTok: Dhacdooyinka Websaydha Raadinta
U beddelashada isticmaaleyaasha TikTok adeegsadayaasha websaydhka ee soo booqan kara ama soo iibsan kara badeecadaha ama adeegyada boggaaga way ku fududaan tahay pixel tracking TikTok.
TikTok: Raadinta Dhacdooyinka-App
Marka isticmaalehu uu riixo / arko xayeysiinta oo uu qaado talaabooyin dheeri ah sida soo dejinta, dhaqaajinta, ama sameynta wax ku iibsiga gudaha gudaha daaqadda beddelka loo dejiyey, Wada-hawlgalayaasha Cabbirka Moobilka (MMP) ayaa diiwaangeliya oo u soo celiya xogtaan TikTok beddel ahaan. Xogta beddelka, iyadoo la adeegsanayo tilmaanta ugu dambaysa, ayaa markaa lagu muujiyaa Maareeyaha Xayeysiiska TikTok waana aasaaska u fiicnaanshaha mustaqbalka ee ololaha.
TikTok loogu talagalay Adeegsiga Ganacsiga: Jaan & Dheh
Maaddaama ay tahay dukaanka dahabka ee madaxbannaan, Slate & Tell waxay raadinayeen inay dhisaan wacyigelin iyo tixgelin inta lagu jiro xilliyada iibka ugu sarreeya. Iyagoo ka faa'iideysanaya TikTok Ganacsi qalab fudud oo loo adeegsado Smart Video Creative isla markaana loo wanaajiyo ololeyaasha munaasabadaha, waxay abuureen madadaalo iyo soo jiidasho hal abuur leh oo gaarey 4M TikTok isticmaaleyaal ah waxayna keeneen 1,000 kalfadhi keliya. ku dar gaadhiga beddelaad, ka caawinta iyaga inay gaaraan himiladooda ah 2X celinta-ad-ku-bixinta muddo 6 bilood gudahood ah.
Ka bilow TikTok Maanta!
Tags: b2cxayeysiinta b2cxayeysiinta macaamiishayaain-app xayeysiintaku rakibida barnaamijkaxayeesiinta mobileTikTokmeelaynta tiktokmaareeyaha xayeysiiska tiktoktiktok ganacsigatirakoobyada tiktokDhacdooyinka bogga tiktokxayeysiis video ahxayeysiinta fiidiyowga